Ogaden News Agency (ONA) – Barnaamijka Aragtida Halgamaaga ee Todobaadkan iyo Xuseen Noor
Barnaamijka Aragtida Halgamaaga ee Todobaadkan iyo Xuseen Noor
Waxaa Todobaadkan Barnaamijka AH-17aad inoogu marti ah Xuseen Noor oo ka hadli doona barnaamijyadii u furnaa iyo Su’aalo ku wajahan dhalinyarada FB iyo golayaasha Social Media-ha wax kaga qora halganka.
Wuxuu mudane Xuseen Noor Hordhaca barnaamijka kaga hadlayaa ahmiyadda taariikhda halganka shacabkeena iyo marxaladihii uu ka soo gudbay ururka laga bilaabo 1991 ilaa 1996 oo ah barnaamijyada taxanaha ah ee mudane Xaaji Diirane uu bilaabay lana doonayo xubno kale oo goobjoogayaal ka ahaa marxaladahaa inay ka qaybqaataan.
Ka dib wuxuu mudane Xuseen Noor ku sii faahfaahinayaa barnaamijkiisa siyaabaha lagu garto kooxaha uu ku kala tilmaamay –Murjifiinta iyo Khawaalifta – oo tusaalooyin uu ku ifin doono.
Wuxuu si fiican oo dhaxalgal ah uga hadlayaa kooxaha FB iyo Social Media-ha dagaalka kaga jira oo uu Xuseen Noor ku tilmaamay inay aqoontoodii la doonayay inay Bulshada uga Faa’ideeyaan ay ugu garbeeyeen Gumaysiga umadooda haysta. Wuxuu ku tilmaamay wax la yaab leh oo muujinaysa in aanay Somalidu lahayn wadinyad ka xanibta waxaan u qalmin dalkooda iyo diintooda sida mucaaradka dhabta ah ee Itobiyaanka ay u muujiyaan qadiyadooda iyo dadka jeelasha uga jira, dhalinyaradanna ay ugu mashquuleen wuxuu ku sheegay inay hagardaamo ku tahay umadooda oo naftooda dhibi doonta aduun iyo aakhiraba.
Wuxuu Xuseen Noor weydiinayaa Kooxda, sababta mucaaradka Itobiya ay caalamka meelwalba u gaadhsiinayaan 4ta qof ee ka xidhan, iyagoon marnaba soo hadal qaadin xaqqa nolosha ee dadweynaha Somaliyeed iyo kumanaanka Jeel Ogaden ugu xareysan Abaraha iyo Cabdi iley. Wuxuu weydiinayaa kooxahaa waxa u diiday inay matalan dhibaatada laga soo sheegay Suldaan Fawsi ay caalamka usoo bandhigaan, intay ku mashquuli lahaayeen wax ka sheega xubnaha iyo halganka socda !!
Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan arima muhiim ah, isagoo codsaday wixii su’aal ah ee ku saabsan in loogu soo hagaajiyo cinwaankiisa gaarka ah ama cinwaanka barnaamijka ee ah;